မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ. တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းတွေနဲ.. စစ်တပ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ. စစ်သားတိုင်းရဲ. တူညီသော ရည်မှန်းချက်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို.ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ငြိ် မ်းချမ်းရေး လိုချင်ပါတယ် ပြောဆိုပါစေ။ လက်တွေ.ကျကျ တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ. စစ်သားတွေလောက် ဘ ယ် သူကမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလိုမရှိကြပါဘူး။ ထိုသို. ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရန်အ တွက် နှစ်ဖက်စလုံးမှ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲရေး မူကြမ်းကို ရေးဆွဲ ကြရပါတယ်။ ထိုသို. ရေးဆွဲ ရာတွ င် နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး သဘောတူ လက်ခံနိုင်ဖို.မှာလည်း အလွန် အရေးပါလှပါသည်။
လိုင်ဇာဆွေးနွေးပွဲ ပြီးတဲ.နောက်မှာ UNFC က ရေးဆွဲတဲ. မူကြမ်းက ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုတဲ. အဓိ ပ္ပါယ် ဖွင်.ဆိုချက်ကို ဖတ်ကြည်.လိုက်ပါတယ်။ ရေးသားထားတဲ.အချက်တွေ၊ တောင်းဆိုထားတဲ. အချ က် တွေက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ. စစ်တပ်ကို ရန်တိုက်ပေးထား တဲ. စစ်ကြေငြာ စာကြီးလို ဖြစ်ေ နတာကိုး။ ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက် ချင်လျင် စစ်တပ်ရဲ. အခန်းကဏ္ဌကို လျော.ချခြင်လျှင် ၊ ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြီးသတ်ရမှ ရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
စစ်ကိုရပ်ဖို.နဲ. ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို.ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ.မှာ မလွယ်ပါ ဘူး။ ပြည်နယ်တွေ ခွဲဝေသက်မှတ်ရမယ်.ကိစ္စ ၊ အာဏာနဲ. နိုင်ငံရဲ. အရင်းအမြစ်တွေနဲ. ဆိုင်တဲ. နိုင်ငံရေး ကိစ္စ တွေဆိုတာ ပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စစ်အစိုးရနဲ. တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တွေအကြား လက်ေ တွ.ကျ ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ. ညှိနိုင်းမှု.တွေ လုပ်ဖို.လိုအပ်သလို နှစ်ဦး နှစ်ဖက် သဘောတူ ညီဖို. လည်း လို အပ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုတာ စာသားလေး လှသလို နားထောင် လိုလ ည်းကောင်းပါတယ် ။ သိုသော် လက်တွေ.လုပ်ဆောင်ဖို.ဆိုရင်သာ ခက်နေတာပါ ။တဖက်နဲ. တဖက် တောင်း ဆိုမှု.တွေက မဖြ စ်နိုင်တာတွေ များနေတာ တွေ.ရပါတယ် ။ သဘာဝကျကျ ဖြစ်သင်.တာကို မတောင်း ဆိုဘဲ UNFC မှ နိုင်ငံ ရေး စားဖားကြီးများက ကိုယ်ဖြစ် ချင်သည်. အချက်အလက် များကို သာ တော င်းဆိုနေတာ တွေ.ရပါတယ် ။
လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု. ပြင်းထန်နေတဲ. မြန်မာပြည်ကြီးမှာ တပ်မတော်ကို တိုင်းရင်းသားတပ်ရင်းတွေနဲ. သီးခြားစီ ဖွဲ.စည်းခဲ.လို. တိုင်းရင်းသားတွေ တပ်ရင်းလိုက် တောခိုပြီး ကိုယ်.တပ်စွဲထားတဲ. မြို.ကို ကိုယ်ပြန် သိ မ်းခဲ.တဲ. သာဓကတွေလည်း အသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တကယ်.တမ်း တိုက်ကြပြီဆိုရင် အခွင်.အ ရေး လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ. နိုင်ငံရေး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက ရှေ.တန်းကျကျ လိုက်ပါပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်ကြလိုလား? သူတို က နောက်ကွယ်ကနေပဲ တိုင်းရင်းသားတွေကို အသုံးချပြီး ခိုင်းစေနေတာ ပါ ။ အခြေအနေ မဟန်တော.ရင် နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြေးမယ် ။ဒီလိုနဲ.ပဲ နေလာတာ သူတို. တစ်သက်ပဲ ရှိနေပါပြီ ။ခုလည်း စစ်အစိုးရကို ခြေ ရာတိုင်းဖို. လုပ်လာပြန်ပါပြီ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံး ပေါင်းမှ အင်းအားက စစ်တပ် ရဲ. လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကို စစ်အစိုးဘက်က လိုက်လျောပေးတိုင်း ရနိုင်သမျှ အခွင်.အရေးတွေ ယူနေတာ ဖြစ်သလို ခုလည်း ပေါ်တင် စိန်ခေါ်ြ ပီးတောင်းဆိုလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
တောင်းဆိုထားတာတွေကတော. တိုင်းရင်းသား အဖွဲ.အစည်းတွေကနေ ကြည်း ၊ ရေ ၊ လေ စစ်ဦးစီး ချုပ် တွေမှာ တဖွဲ.ချင်.က အလှည်.ကျ ၀င်လုပ် အုံးမယ်ဆိုဘဲဗျာ ။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကိုလည်း လူမျိုး လို က် တပ်ရင်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီး အလှည်.ကျ လုပ်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုတာပါပဲ။ စဉ်းစားကြည်.ကြပါ။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ.အစည်း အင်အား မဖြစ်စလောက်နဲ. တောထဲမှာဘဲ တစ်သက် လုံးနေလာတဲ. အဖွဲ.တွေ ၊ လက်နက် အစုတ်တွေနဲ. အမြင်.ဆုံး တိုက်ပွဲဆိုလို. ရွာထဲကိုဝင်ပြိး ဆက်ကြေး တောင်းတာလောက်ပဲ တိုက်ခဲ. ဖူးတဲ. ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ. လက်ထဲကို တပ်မတော်တစ်ခုလုံး ၀ ကွက်အပ်ရမ ယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိူင်ပါ.မလား ။ ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်းစားပြီးမှ ပြောစေချင်ပါတယ်။ တကယ်ငြိမ်း ချမ်းရေး မလိုချင် လို. တောင်းဆိုမှန်း ဘယ်သူမဆို သိနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ဆိုတဲ.ကောင်တွေကလည်း အသိဥာဏ်နည်းတော. ဒီလိုလုပ်ရင် ငွေတွေ ၊ အခွင်.အရေးတွေ မျိ်ုးမျိုးမြတ်မြတ် ရနိုင်တယ်ဆိုပြီး UNFCက နိုင်ငံရေး စားဖားတွေ ပြောသမျှ အဟုတ်ြ ကီး တွေ ထင်ပြီး လိုက်လုပ်နေကြတာပါ။ မဖြစ်နိုင်တဲ. အခွင်.အရေးတွေကို တိုးပြီး တောင်းခိုင်းမယ်။ အစိုးရက မလိုက်လျောပေးနိုင်တော. အစိုးရကြောင်. ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးဆိုတဲ. ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အပြစ် ပုံချမယ် ။ တို င်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ. အစိုးရကို အဆင်မပြေဖြစ်အောင် တိုက်ပေးပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ် ချ င်တဲ. စိတ်ဓါတ်ကိုတော. ကြိုက်လွန်းလို.ပါ။
အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းဖွင်.ပေးတဲ. အခွင်.အရေး တွေကိုလည်း ရသလောက် အကုန်ယူတ ယ် ။ နောက်ထပ်လည်း မဖြစ်နိုင်တဲ. အချက်တွေကို အစိုးရက လိုက်လျောပေးရင် အမြတ်ပဲဆိုပြီး ထပ်ေ တာင်းဆိုတယ် ။ ဒါကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခုတုန်းလုပ်ပြီး အမြတ်ထုတ်နေကြတဲ. နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ. လုပ်ရပ်ပါပဲ။ ဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို. တွေ.ဆုံပွဲတွေ ခနခနလုပ်မှ နိုင်ငံရေး စားဖားကြီးတွေအတွက် အကျိုးအမြတ် များများကျန်မှာလေ ။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစကတည်းကမှ မျော်မှန်းမထားတဲ. UNFC က နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. ဘန်ေ ကာက်မြို. အဲယားကွန်းအခန်းထဲက ဆောင်းတွင်းအိမ်မက် မက်ပြီး ရေးချလိုက်တဲ. ပြည်ထောင်စု တပ်မေ တာ် ဆိုတဲ. မူကြမ်းကြီးကို လက်ခံဆွေးနွေးဖို. မပြောပါနဲ. ။ မြန်မာပြည်ထဲကို ယူဆောင် မလာတာကိုက အကောင်း`ဆုံးပါ ။မဖြစ်နိုင်တာကို သိသိနဲ. တောင်းဆိုထားတဲ. တောင်းဆိုချက်တွေကို အစိုးရကလည်း လို က်ေ လျာပေးပါလိမ်.မယ် ။ ၄၈ ၄၉ တုန်းက ရန်ကုန်အစိုးရ လုပ်ခဲ.သလိုပေါ. ။ အားလုံး မှတ်မိကြလိမ်. မယ်လို. မျှော်လင်.ပါတယ်။
at 12/02/2013 12:44:00 PM
​မြန်​မာ​ရေ​လုပ်​သား ၈ ​ဦး​ကို ​သတ်​သူ​များ ​ထောင်...
ကလေးစစ်သား ပပျောက်ရေး သဘောတူစာချုပ် သက်တမ်း ထပ်တို...
ဥရောပသို့ ဆန်တင်ပို့ရေး မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား အြ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ...
တပ်မတော်သည် “ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်” ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူ...
ဂန္ဒီအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ အထပ်မြင့် ကွန်ဒိုဆောက်လ...
​ရိုး​ရာ​ခြင်း​လုံး​ပြိုင်​ပွဲ ​မြန်​မာ ​အ​မျိုး​သ...
မွတ်ဆလင်များကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် စည်းရုံးမည်ဟု ဦး...
NLD နှင့် USDP ပါတီဝင်များ တရုတ်သို့ လေ့လာရေးသွားမ...
ချက်စ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆူညံပါက ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးရမည်
မှော်ဘီက ထူးခြား ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုများ ဖူးမျှေ...
"N ကိုင်ရာ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်"
အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ လွှတ်တေ...
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် အတွင်းအပြင် လျော်ကြေးငွေ...
မင်းသားကြီး မလုပ်ရသဖြင့် ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်သည့် နိ...
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ...
ဖခင်ကို ထောင်ချလိုက်သည့်အတွက် သမီးဖြစ်သူအဆိပ်သောက်...
ရိုဟင်ဂျာ/ဘင်္ဂါလီတို့ကို နိုင်ငံသားပြုရေးကို ရန်ကုန...
“ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ...
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး ကော်မရှင်မှ ဘင်္ဂါလီများကို တို...
HIV/AIDS အတွက် သီးခြားဘဏ္ဍာငွေ ထုတ်ပေးရန် လွှတ်တော်တင...